ES420-26P L2 Gigabit Mfe Njikwa Nweta Nweta
DCN ES420-26P bụ Gigabit Managed Ethernet Switch, na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 na ọdụ ụgbọ mmiri 2 SFP. Ọ bụla ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado akpaka MDI / MDIX ọrụ, na ike nweta waya-ọsọ ebugharị. Ihe ntụgharị ES420-26P bụ nnukwu njikwa njikwa ntanetị Layer 2 nke emebere ma mepụtara onwe ya maka iwulite netwọkụ gigabit dị elu. Ọ na-enye usoro nchekwa nchebe zuru ezu, usoro QoS zuru ezu, na ọrụ VLAN bara ọgaranya. Ọ dị mfe ijikwa na ilekọta, ma ọ bụ ...
ES420-10P L2 Mfe Mgbanwe Mfe
DCN ES420-10P na-enye ọrụ 8 * 10/100 / 1000M akpaaka MDI / MDIX gbakwunyere ọdụ ụgbọ mmiri 2 * SFP nke nwere ike ịghọta ntụgharị ọsọ ọsọ. Ọ nwere ike ịkwado ACL dabere na ọdụ ụgbọ mmiri, iji nweta nlekota nyocha ntanetị, njikwa okporo ụzọ, okwu kacha mkpa na ịga n'ihu; kwado STP / RSTP / MSTP L2 njikọta teknụzụ nchedo, meziwanye njikọ njikọta njikọta, hụ na nkwụsi ike netwọkụ; kwado ACL dabere na oge iji nweta njikwa nnweta ziri ezi n'ụzọ dị mfe; nkwado Nyocha 802.1x dabere na MAC na p ...
DIN-Rail L2 Industrial Gbanye
IS2100D (R2) Series Industrial mgba ọkụ anapụta elu-ọsọ Gigabit Ethernet Njikọta na kọmpat ụdị na e mere maka a dịgasị iche iche nke ulo oru ngwa ebe a tara akpụ ngwaahịa chọrọ. E wuru ikpo okwu iji guzogide gburugburu ebe obibi siri ike n'ichepụta, ike, njem, igwupụta ihe, na obodo ndị mara mma. Ihe ikpo okwu IS2100D (R2) dikwa nma maka ntinye ntinye aka nke ndi ozo n'èzí, ulo nkwakọba ihe, na ebe nkesa. Ndị a switches na-agba ọsọ software dabeere ...
IS5600G-2U / IS5600XG-2U Industrial Gbanye
IS5600G-2U / IS5600XG-2U oyi akwa 3 modular gigabit ulo oru ethernet mgba ọkụ na-akwado usoro Layer 2/3 zuru oke. Ọ na-enye a mgbanaka ejighi oru usoro nke nwere ike ịbụ ezigbo oke maka aggregation oyi akwa n'ime factory akpaaka na usoro akara ngwa. IS5600G-2U / IS5600XG-2U na-enye oghere 8- ọdụ ụgbọ mmiri 1000Mbps Ethernet modular na otu ọdụ ụgbọ mmiri 1000Mbps / 10Gbps modular oghere na ngalaba ihu. Ngwakọta Giga port modul na-enye SFP interface maka GE / 10G elu ma ọ bụ ...
IS5600 usoro modular gigabit ulo oru ethernet mgba oku na-akwado usoro Layer 2/3 zuru oke. Ọ na-enye a mgbanaka ejighi oru usoro nke nwere ike ịbụ ezigbo oke maka aggregation oyi akwa n'ime factory akpaaka na usoro akara ngwa. Njirimara na Uru Isi Njirimara Na-enweghị ọsọ ọsọ Layer2 / 3 na-aga n'ihu ọtụtụ ọnụego Ethernet ọnụego mgbanaka enweghị ike inye mgbake ntanetị. Ejikọtara ya na SNMP njikwa sọftụwia iji nye netwị zuru ezu ...
EAC680 SMB Smart Ikuku Access njikwa
DCN EAC680 bụ onye njikwa nnweta amamịghe (AC) mepụtara maka netwọki ikuku SMB na ngalaba nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ nwere ike ijikọta ya na DCN smart EAP series wireless access points (AP) iji mepụta ihe ngwọta LAN (WLAN) na-ejikọtaghị ọnụ. EAC680 na-akwado 24 10/100 / 1000MBase-T na 4 * 10GbE SFP +) maka uplink, ọ nwere ike ijikwa 520 smart wireless AP. Ngwaọrụ ahụ na-enye njikwa nnweta WLAN siri ike site na sistemụ dịka njikwa njikwa na njikwa njikwa, njikwa RF zuru ezu yana nche ...